128 products များ
Bass bluetooth woofer speaker (10 inches)
 Computer ; Laptop ; Portable EVD & DVD , Mobile phone , tablet , တို့နှင့်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။  အသံထွက်ချက်ကတော. Big speaker တွေ အတိုင်းဘဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်။
 စက်ဘီးစီးတဲ့အလေ့အထ ပြန်လည် ဆန်းသစ်လာတာနဲ့ အမျှ စက်ဘီးဆိုရင် မော်ဒယ်မြင့်မှ လန်းမှ အကြမ်းခံပါတယ်
 Computer , Laptop , Mobile Phone ,Tablet တို့နှင့်Bluetooth ချိတ်ဆက်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။  SD ကဒ်ရော Stick ကော နှစ်မျိုးလုံးဆိုဒ်ပြီးတွဲသုံးလို့ရသလို့။
 Function , menu , volume + / - , next , play , phone accept , AuX Button contain.  Phone လာလျင်လည်း speaker မှတဆင့် phone ကိုင်နိူင်ပါတယ်။
 Stainless Steel ဖြင့်ပြု လုပ် ထားသေား တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံး နှင့် လုံခြုံရေးသုံးလက်ကိုင်တုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1 - 12 မှ 128 items